10 mitsara mipfupi yaWalt ​​Whitman | Zvazvino Zvinyorwa
10 mapfupi akatorwa kubva kuna Walt Whitman
Encarni Arcoya | | Vanyori, Literature, Nhetembo
Walt Whitman, mudetembi weAmerica, akazvarwa muna 1819 uye akafa muna 1892. Muhupenyu hwake hwese, pamusoro pekutisiira mabasa akanaka se Ah, Kaputeni! Kaputeni wangu! "," Kureba kwemuviri wangu "," Mashizha ehuswa " o "Rwiyo rwangu", Akasiya mitsara isingaverengeke yataigona kunyatsowana pfupi dzidziso yehupenyu mune yega yega.
Paive nevanyanduri vazhinji vaikanganiswa nhetembo yake yemazuva ano, kusanganisira vakuru vakaita sa Ruben Dario, Wallace Stevens, DH Lawrence, Fernando Pessoa, Federico Garcia Lorca, Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, Etc.
Ipapo tinokusiya uine 10 mapfupi akatorwa kubva kuna Walt Whitman izvo zvinotitaurira zvakawanda nezvake, hunhu hwake, hunhu hwake ...
1 Mapfupi mitsara uye makotesheni
2 Yakanyorwa zvinyorwa pamusoro paWalt ​​Whitman
3 Zvido zveWalt Whitman
3.1 Baba vaWalt ​​Whitman
3.2 Kufungidzirwa nekuongorora basa rake
3.3 Akave anozvisimudzira pabasa rake
3.4 Matipi ehutano Walt Whitman akasiya kumashure
3.5 Uropi hwaWalt ​​Whitman hwakakandwa mumarara
4 Mamwe makwikwi anozivikanwa kubva kuna Walt Whitman
Mapfupi mitsara uye makotesheni
“Kana ndikasangana nemumwe munhu handina basa nekuti vachena, vatema, maJuda kana maMuslim. Zvakwana kwandiri kuti ndizive kuti iye munhu wenyama.
«Iye anofamba mineti pasina rudo, anofamba akaputirwa akananga kumariro ake»
"Kana ndikasvika kwandinoenda izvozvi, ndichaigamuchira nemufaro, uye kana ndikasasvika kwemamirioni gumi emakore, ndichamirirawo nemufaro."
«Tora maruva paunenge uchikwanisa
nguva inomhanya nekukurumidza.
Ruva rimwe chete raunofarira nhasi,
mangwana achange afa ... ».
«Kuti ndinozvipikisa? Zvakanaka hongu, ini ndinozvipikisa. Uye izvo? (Ndiri mukuru, ndine vanhu vazhinji).
"Kwandiri, nguva imwe neimwe yemasikati neusiku, chishamiso chisingatsanangurike uye chakakwana."
"Tarisa kusvika paunogona, pane nzvimbo isina muganho ipapo, verenga maawa akawanda sezvaunogona, pane nguva isinga ganhurirwe kumberi uye shure."
"Usaora mwoyo kana ukasandiwana nekukurumidza." Kana ndisiri panzvimbo, nditsvake ini mune imwe. Pane imwe nzvimbo ndinenge ndakamirira iwe.
«Isu tanga tiri pamwe, mushure ndakanganwa».
«Ndakadzidza kuti kuva nezvandinoda kwakakwana».
Yakanyorwa zvinyorwa pamusoro paWalt ​​Whitman
Uye sezvo iwe uchitoziva nezve zvimwe zvichangoburwa zvinyorwa zvangu, ndiri chaizvo kutsvaga mune yakaisvonaka YouTube chikuva, mavhidhiyo kana zvinyorwa izvo zvinotaura nezve munyori isu tiri kubata naye. Pano ini ndinopa yakanaka kwazvo iyo yandakawana pamusoro paWalt ​​Whitman, yakanyorwa zita rekuti.
Zvido zveWalt Whitman
2019 yakaratidza gore re200th raWalt ​​Whitman, mumwe wevadetembi aionekwa seimwe yeiyo America yakanakisa muhafu yepiri yezana ramakore rechiXNUMX. Zvisinei, semunhu chero upi zvake, pane humwe hunhu hunoita kuti huve hwakasiyana, kana hunokwezva kutarisa kwedu.
Tinoda kuunganidza zvimwe zvinonyanya kushamisa zvemunyori uyu. Uye zvimwe zvacho zvinokushamisa iwe zvishoma.
Baba vaWalt ​​Whitman
Walt Whitman akararama kubva muna 1819 kusvika 1892. Anonzi ndiye "baba" wenhetembo dzemazuva ano muAmerica uye murume akashandura nhetembo. Zvisinei, chimwe chinhu chinogona kutorwa kubva munhetembo dzake, kunyanya nhoroondo yeupenyu "Paive nemukomana akaenda kumberi" ndeyekuti hukama hwake nababa vake hwaive husina kunaka.
Muchokwadi, anomuudza nezvake kuti aive murume akasimba, anodzvinyirira, akaipa, asina kururama uye akatsamwa. Mune mamwe mazwi, munhu anogona kuita zvechisimba kana akarega kuita zvaaida. Zvino, tiri kutaura nezve nguva iyo maitiro aya aive akajairika mumhuri zhinji nevabereki.
Kufungidzirwa nekuongorora basa rake
Kuna Whitman, kukwana kwaikosha kwazvo. Zvekuti akatozviitawo nemabasa ake. Ini ndaigara ndichichinja chimwe chinhu nekuti ndaifunga kuti ndaigona kuchivandudza. Ndosaka aivewo nedambudziko rekuburitsa zvinyorwa zvake.
Akaramba achivaruramisa, achichinja, achigadzirisa zvinhu. Muchokwadi, rake basa "Mashizha eGrass" raive nenhetembo gumi nembiri uye muhupenyu hwake hwese aigara achichichinja nekuti aisagutsikana nazvo.
Akave anozvisimudzira pabasa rake
Kana munyori achitaura nezvebhuku rake, zvakajairika kuti iye azviite mumunhu wekutanga uye kurumbidza zvaakaita. Asi Whitman akaenda kumberi. Uye ndizvozvo, tichiona kuti aive nemhinduro zhinji dzisina kunaka, zvine musoro kana tichifunga kuti nhetembo yake yakanga isiri mu "zvakajairika" panguva iyoyo, akaita.
Chii chakaita? Zvakanaka tora mukana webasa rake mumapepanhau kunyora ongororo, pasi pemamwe mazita, kurumbidza basa racho uye vachipokana kuti zvaive zvakanaka asi ivo vaisamuziva uye vasingazive zvaaishaya. Uye zvese izvi zvekuzvitsoropodza zvaive chikamu chezvinyorwa zvaibuda mubhuku rake.
Matipi ehutano Walt Whitman akasiya kumashure
Ehe hongu, hachisi chinhu chatakagadzira. Chaizvoizvo, nyanduri uyu akanyora "Nhungamiro kune Hutano hweVarume uye Kusimba." Chaizvoizvo, izvi zvaive zvinyorwa zvakaburitswa nemunyori muNew York Atlas, kunyanya muchikamu chayo chemuviri.
Akazviita pasi pe pseudonym Mose Velsor, imwe yevaakambo shanda semutori wenhau kana aine matambudziko emari. Uye rairo yake inobata maziso. Semuenzaniso, idya katatu pazuva (mangwanani, masikati, uye kudya kwemanheru). Asi hazvina kugumira ipapo. Akakuudza zvaunofanira kudya mune imwe neimwe: nyama nyowani ine mbatatisi yakabikwa; nyama nyowani; uye muchero kana compote. Ndiko kwaive kudya kwake.
Hora rekusimbisa mangwanani kusimbisa muviri wese, kusapedza nguva yakawanda nemadzimai asi neshamwari, kana kukura ndebvu uye kupfeka masokisi ndidzo dzimwe nzira dzakasiyiwa nanyanduri dzakaratidzirwa muzvinyorwa izvozvo.
Uropi hwaWalt ​​Whitman hwakakandwa mumarara
Whitman akafunga kuti kusangana nemurume, iwe waifanira kuenda muhuropi hwake. Zvichida ndosaka paakafa, huropi hwake hwakatumirwa kuAmerican Anthropometric Society. Ikoko vakabata nekuyera uye kuyera icho nhengo kuti vagadzire hukama nezve hupenyu hwemunhu iyeye.
Dambudziko nderekuti huropi hwakawira pasi ndokupwanyika, pakupedzisira hukandwa kure. Mhedzisiro isina munhu anofanira kupfuura nayo.
Mamwe makwikwi anozivikanwa kubva kuna Walt Whitman
Walt Whitman asiya mitsara mizhinji inozivikanwa, senge yapfuura iyo yatakupa kwauri. Zvisinei, kune vamwe avo, mavari, vakakosha uye vaive kutaurwa kana kunyorwa panguva dzinokosha muhupenyu hwako.
Zvakanyanya, zvekuti isu tinoda kuumbiridza mamwe eawo ayo, kana iwe ukaaverenga, anogona kuita mashandiro mauri. Iwe unoda kuziva kuti ndevapi vatakasarudzwa?
Ini ndiripo sezvandiri, izvo zvakakwana, kana pasina mumwe munhu pasi anozviona, ndinonzwa ndichifara, uye kana mumwe nemumwe achizviziva, ndinonzwa kufara.
Zvinoshamisa sei, kana iwe ukauya kuzosangana neni uye uchida kutaura neni, sei usingataure neni? Uye sei ndisingafanire kutaura newe?
Ndinosangana new Walt Whitmans mazuva ese. Kune gumi nemaviri acho ari kuyangarara. Ini handizive kuti ndiri ani.
Bhuku rakasviba kupfuura ese ibhuku rakadzingwa.
Zorora neni pahuswa, rega kuenda kumusoro kwehuro yako; Chandinoda haasi mazwi, kana mumhanzi kana mutinhimira, kana tsika kana hurukuro, kunyangwe kunyangwe akanakisa; Chete kudzikama kwandinoda, iko kurira kwezwi rako rakakosha.
Mira neni masikati neusiku uye iwe uchave nekwakatangira nhetembo dzese, iwe uchave nekunaka kwepasi uye nezuva ... kwasara mamirioni ezuva, hauchazotora zvechipiri kana zvechitatu zvinhu zvemaoko ... kana kuzotarisa kuburikidza nemeso evakafa ... uye hauzofura pane anotarisa mumabhuku, uye hautarise nemeso angu, uye hautore zvinhu kubva kwandiri, teerera kwese kwese wozvichenesa kubva kwauri.
Ramangwana harina chokwadi kupfuura razvino.
Unyanzvi hwounyanzvi, kubwinya kwekutaura uye kupenya kwezuva kwetsamba kuri nyore
Shizha rudiki diki rehuswa rinotidzidzisa kuti kufa hakuna; kuti kana yakambovapo, yaingova kuburitsa hupenyu.
Iwo asingagumi asingazivikanwe magamba akakosha zvakanyanya seaya makuru magamba munhoroondo.
Ndinopembera uye ndinoimba ndega. Uye izvo zvandinotaura nezvangu ikozvino, ndinotaura pamusoro pako, nekuti izvo zvandinazvo ndezvako, uye atomu yega yemuviri wangu ndeyako zvakare.
Hondo dzinorasika mumweya mumwe iwo iwo wavakakunda.
Uye zvisingaonekwi zvinoedzwa nezvinoonekwa, kudzamara izvo zvinoonekwa zvoonekwa uye zvoedzwa zvekare.
Iwe wakadzidza here izvo zvidzidzo kubva kune avo vaiyemura iwe, vaive vane moyo munyoro newe, uye vakakusundira padivi? Hauna here kudzidza zvidzidzo zvikuru kubva kune avo vakagadzirira kupokana newe uye vakapokana ndima newe?
Chakavanzika chechinhu chese kunyora munguva, kurova kwemoyo, mafashama enguva, kusiya zvinhu pasina kutaurirana, pasina kunetseka nezvechimiro chako, pasina kumirira nguva yakakodzera kana nzvimbo. Ini ndaigara ndichishanda nenzira iyoyo. Ndakatora kapepa kekutanga, musuwo wekutanga, dhesiki rekutanga, ndikanyora, ndikanyora, ndikanyora ... Nekunyora munguva pfupi, kurova kwehupenyu kunobatwa.
Nzira yehungwaru yakavezwa nekuwedzera. Mucherechedzo wemunyori wechokwadi kugona kwake kuzivisa zvakajairika uye kuziva zvisinganzwisisike.
Munyori haangakwanise kuitira varume chimwe chinhu kunze kwekungovaratidza pachena zvisingaite zvemweya yavo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » 10 mapfupi akatorwa kubva kuna Walt Whitman
Victor rivera pasco akadaro
Ndima iyo inoverengeka kana zvishoma kuverenga seizvi inoshaikwa:
Gara neni zuva rimwe neusiku humwe
uye iwe uchaziva kwakatangira nhetembo dzese ... »
Pindura kuna Victor Rivera Pasco
Luis de Góngora. Chirangaridzo cherufu rwake. 6 akasarudzwa mamoneti
Alexander Pope. Chiitiko chekuzvarwa kwake. Zvimedu zvemabasa ake